ANOVA (Uhlalutyo lweNguquko) - Izibalo Inkcazo
IMathematika Statistics Statistics
Amaninzi amaninzi xa sifunda iqela, siqhathanisa ngokwenene abantu ababini. Ngokuxhomekeke kwiparameter yale qela sinomdla kuyo kunye neemeko esizijongene nazo, kukho iindlela ezininzi ezikhoyo. Iinkqubo zokungqinelana kwezibalo ezithintela ukuthelekiswa kwabantu ababini azikwazi ukusetyenziswa kwiindawo ezintathu okanye ngaphezulu. Ukufunda abantu abangaphezu kwembini ngexesha elilodwa, sidinga iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zokubala.
Uhlalutyo lokuhluka , okanye i-ANOVA, yindlela yokuphazamiseka kwemilinganiselo evumela ukuba sijongane nabantu abaninzi.
Ukubona ukuba ziphi iingxaki kunye nokuba kutheni sifuna i-ANOVA, siya kuqwalasela umzekelo. Masithi sithi sizama ukugqiba ukuba iinqwelo eziqhelekileyo eziluhlaza, ezibomvu, eziluhlaza kunye ne-orange kunye ne-orange kunye ne-orange zihluke komnye. Siza kuthetha iinqweliselo zesisiseko kubo bonke aba bantu, μ 1 , μ 2 , μ 3 μ 4 kunye ngokulandelanayo. Singasebenzisa uvavanyo olufanelekileyo lwezihlandlo eziliqela, kwaye uvavanyo lweC (4,2), okanye iingqungquthela ezi-6 ezingafaniyo:
H 0 : μ 1 = μ 2 ukujonga ukuba isisindo sokubaluleka kwesibalo sabantu abomvu siyahluke kunokuba isisindo sininzi sabemi be-blue candies.
H 0 : μ 2 = μ 3 ukujonga ukuba isisindo sesisombululo sabantu bamacandi ahlaza okwesibhakabhaka ahluke kunomlinganiselo osisiseko sabantu abathandwayo be-green pandi.
H 0 : μ 3 = μ 4 ukujonga ukuba isisindo sokubaluleka kwesibalo sohlobo oluhlaza luhluke kunokuba isisindo esininzi sabantu base-orange candies.
H 0 : μ 4 = μ 1 ukujonga ukuba isisindo sokubaluleka kwesibalo samanandi e-orange sihluke kunomlinganiselo wesisombululo sabantu basebhanki abomvu.
H 0 : μ 1 = μ 3 ukujonga ukuba isisindo sesisombululo sabantu abomvu beefom ehlukileyo kunesisindo esinzima sabemi bee-green pandi.
H 0 : μ 2 = μ 4 ukujonga ukuba isisindo sokubaluleka kwesibalo se-blue candies sihluke kunomlinganiselo wesisindo sabantu base-orange candies.
Kukho iingxaki ezininzi ngale ndlela yokuhlalutya. Siza kuba ne-six- p- values . Nangona sinokuvavanya nganye kwizinga le-95% lokuzithemba , ukuzithemba kwethu kwinkqubo yonke kungaphantsi kwalokhu ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuphindaphinda: .95 x .95 x .95 x .95 x .95 x .95 malunga nango .74, okanye inqanaba lama-74% lokuzithemba. Ngako oko inokwenzeka yolu hlobo Iphutha liye landa.
Kwinqanaba elingundoqo, asikwazi ukuthelekisa le iiparitha ezine ngokubanzi ngokuthelekisa ezimbini ngelo xesha. Iindlela ze-M & N zibomvu kunye ne-blue zingabonakala zibalulekileyo, kunye nesisindo sokubomvu sibe sikhulu kunomlinganiselo wesisindo obomvu. Nangona kunjalo, xa sicinga iinqweliselo zezilwanyana ezine zohlobo lwe-candy, akukho mfahluko omkhulu.
Ukujongana neemeko esiyidingayo ukwenza ukuthelekiswa okuthe xa sisebenzisa i-ANOVA. Olu vavanyo luvumela ukuba siqwalasele iiparameters zabantu abaningana, ngaphandle kokufikelela kwezinye zeengxaki ezijongene nathi ngokuqhuba iimvavanyo zeengcamango kwiiparitha ezimbini ngelo xesha.
Ukuqhuba i-ANOVA kunye nomzekelo we-M & M ngasentla, siya kuhlola i- hypothesis ye-null 0 : μ 1 = μ 2 = μ 3 = μ 4 .
Oku kuchaza ukuba akukho ntlukwano phakathi kweesisindo ezinqamlekileyo zobomvu, obomvu kunye no-M & N. I- hypothesis enye yinto yokuba kukho ukumahluko phakathi kweesisindo eziqhelekileyo zobomvu obomvu, obomvu, ohlaza kunye ne-orange M & Nks. Le ngcamango idibeneyo yeendidi ezininzi H a :
Isisindo sokubaluleka kwenani lamanqabunga abomvu alinganayo nesisindo esinokubaluleka kwesibalo se-blue, i-OR
Isisindo esithini sabantu abathandwayo baluhlaza alulingani nesilinganiselo esinokubaluleka kwesibalo samanqabunga aluhlaza, OKANYE
Isisindo sokubaluleka kwesibalo samagqabi aluhlaza alinganayo nesisindo sokubaluleka kwenani lamanandi e-orange, OKANYE
Ubunzima obuninzi boluhlu lwamacandi aluhlaza alulingani nesilinganiselo esinokubaluleka kwenani labomvu obomvu, OKANYE
Isisindo sokubaluleka kwenani lamanqabunga aluhlaza alinganayo nesilinganiselo esinokubaluleka kwesibalo samanandi e-orange, OKANYE
Isisindo sokubaluleka kwenani lamanqabunga aluhlaza alinganayo nesisindo esinokubaluleka kwesibalo samabomvu obomvu.
Kulo thuba lithile ukuze sifumane ixabiso lethu le-p siza kusetyenziswa ukusabalalisa okunokwenzeka okubizwa ngokuba yi-F-distribution. Ukubala okubandakanya uvavanyo lwe-ANOVA F lunokwenziwa ngesandla, kodwa ngokuqhelekileyo lubalwa ngesofthiwe yesalathisi.
Oko kuhlukanisa i-ANOVA kwezinye iindlela zokubala ukuba kusetyenziswa ukwenza ukuthelekiswa okuthe ngqo. Oku kuqhelekileyo kuwo onke amaninzi, njengokuba kukho amaxesha amaninzi apho sifuna ukuthelekisa ngaphezu kwamaqela amabini kuphela. Ngokuqhelekileyo uvavanyo jikelele lubonisa ukuba kukho uhlobo lokwahlukana phakathi kweeparitha esizifundayo. Emva koko silandela olu vavanyo kunye nolunye uhlalutyo ukuze sinqume ukuba yeyiphi ipharamitha eyahlukileyo.
Yiyiphi iNqanaba likaAlfa elichaza ukuBaluleka kweSatisati?
Ukubala I-Interval ye-Confidence ye-Average
Ulukhulu kangakanani lobuninzi beSampuli Ngaba luyadingeka kwiMida ethile yePazamo?
Indlela yokwakha i-Confidence Interval for Population Proportion
Ukwahlukana phakathi kohlobo I nohlobo II Iiphene kwi-Hypothesis Testing
Uluphi Uhluko phakathi kwe-Alpha kunye ne-P-Values?
Umzekelo wovavanyo lwe-Chi-square kwiNzululwazi yeZizwe ezininzi
Ubungakanani beeDibhuli zeBhodi
Ngakanani na maxesha amaninzi Ngaba kufuneka uthabathe i-SAT?
Yintoni Eyenza Unobhala?
Yintoni iWicker Man?
10 Iimfazwe eziNene ezona ziLwimi nje kuphela
Ingxoxo kunye ne-Indian Women's Sarojini Sahoo
Ukuqonda ukuhlukana kwiBakala leBlue Comics
Kutheni i-Teaching is Fun
Iimpawu Zomtshato WamaKristu kunye neNkcubeko
Imbali yeBet Belts
Pump Up Power Ping-Pong Amandla
Amava e-Theatre eShakespeare's Lifetime
I-calorimetry kunye ne-Flow Flow: Isebenza ngeKhemistry iingxaki
Indlela i-Social Media iguqule ngayo ezopolitiko